खुसीको खबर ! आज घट्यो सुन चाँदीको भाउ, तोलाको कति ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/खुसीको खबर ! आज घट्यो सुन चाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
खुसीको खबर ! आज घट्यो सुन चाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
आज (सोमबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ४ सय तथा तेजावी सुन ७१ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हजार ६ सय तथा तेजावी सुन ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज बजारमा सुनको भाउसँगै चाँदीको भाउ पनि उकालो लागेको छ ।
आज चाँदी प्रतितोला ८ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार चाँदी ८ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
भनिन्छ मान्छे जस्तो सोंचाइ राख्छ उस्तै हुन्छ । त्यसैकारण सोंचाइ जहिले पनि सकारात्मक राख्नु पर्छ । ग्रन्थहरुमा यस्ता ७ ब्यक्ति तथा चिजहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको जसलाई कहिल्यै पनि शंका गर्नु उचित मानिँदैन ।
१ तीर्थः तीर्थमा भगवानको बास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । तीर्थमा भक्तहरुको भिड समेत हुन्छ ।यदि तपाइँलाई विश्वास लाग्दैन भने मन्दिर लगायतका तीर्थस्थल नजानुस् तर गैसकेपछि त्यहाँ शंका नगर्नुस्। तीर्थमा गएर अविश्वास गर्नाले तपाइँको पुण्य नाश हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
२ मन्त्रः देवी देवताको मन्त्र पनि अविश्वास गर्न नहुने चिज मानिन्छ । देवी देवता तथा मोक्ष प्राप्तिका लागि मन्त्रहरुलाई सबैभन्दा सजिला हतियार मानिन्छ । मन्त्र पाठ गर्दा श्रद्धा र विश्वास सहित गर्नुस् ।
३ ब्राम्हणः शास्त्रमा ब्रम्हणको महत्व उच्च रहेको उल्लेख छ । कुनै पनि शुभ कार्य गर्नका लागि ब्रम्हणको आवश्यकता पर्छ । शुभ कार्य गर्ने ब्रम्हणप्रति अश्रद्धा प्रकट गर्नु पाप मानिन्छ ।
४ ज्योतिषीः कुनै पनि ग्रह दशा वा कुण्डलीका कुरा सोध्न परे हामी ज्योतिषकोमा जान्छौं । कतिपय ब्यक्तिलाई भने ज्योतिषप्रति विश्वास लाग्दैन ।यदि तपाइँ ज्योतिषकोमा जानु हुन्छ भने श्रद्धापूर्वक जानुस् । ज्योतिषकोमा जाने तर अविश्वास गर्नु पाप मानिन्छ ।
५ चिकित्सकः भनिन्छ ठूला ठूला असाध्य रोग पनि निको हुन्छन् तर विश्वास चाहिन्छ । औषधी र चिकित्सकलाई कहिल्यै पनि अविश्वास नगर्नुस् । औषधी र चिकित्सकलाई अविश्वास गर्दा उल्टो असर पर्न सक्छ ।
६ गुरुः जीवनमा सफलता पाउनका लागि गुरुको आवश्यकता हुन्छ । गुरुलाई संसारबाट मुक्ति दिने मुक्तिदाता समेत भनिन्छ । श्रेष्ठ गुरु पाउन कठिन छ । यदि तपाइँले कसैलाई गुरु मान्नु हुन्छ भने सँधै विश्वास गर्नुस् ।
७ देवताः देवताको विषयमा मनिसका अनेक अनेक सोंच हुन्छन् । तर कहिले काँहि आफूले सोंचेको कुरा नहुँदा र आपत विपद आइपर्दा मानिसहर देवता नभएको भन्ने गर्छन्। तर देवताप्रति अविश्वास पनि पाप मानिएको छ । किन भने आस्तिक भावनाले जीवनलाई सहज बनाउने मात्र होइन सकारात्मक भावना पनि दिन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका यी ७ कुरामा कहिल्यै पनि अविश्वास नगर्नुस् ।
ईनारमा डुबेर वृद्धको मृत्यु
कोरोना सुरु भएको चीनको उहानमा विश्वमै कहिल्यै नभएको पहिलो घटना भयो
नेपालीहरुले हद पार गरेर लापरवाही गरेका कारण फैलियो कोरोना
पहिलो गीत रेकर्ड गरेर घर फर्किएका नारायण गोपालको टाईटल पाएका ‘जन्तरे मामा’ लाई घरमा स्वागत, पहिलो पटक काठमाण्डौँ यात्रा यस्तो (भिडियो सहित्)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ